I-oyile iRubhi yeBhulorho yokuGcina iBhafu yokuGcina iBhafu ngeBhafu yegumbi lokuFaka i-Faucet ye-Hole 3 Hole Lavatory Faucet
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / WOWOW I-oyile ehlikiweyo ngeBronze Igumbi lokuhlambela lokuSinki
WOWOW I-oyile ihlikiwe ngeBronze Igumbi lokuhlambela leSink Faucet
ikaliwe 5.00 Kwi-5 esekelwe kuyo 5 amanqaku umthengi
(5 ncomo ngumthengi)
Isinyithi esihle sisebenza kabini ukuphatha ukusebenza kunye nolawulo lobushushu.
I-valam disc disc idlula imigangatho yobude beshishini, iqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo ebomini
I-3-Hole Mount ene-intshi ye-4 ye-Centreset yoyilo: Iza nomsele, i-cUPC eqinisekisiweyo ngemigca yamanzi ashushu nabandayo kunye neiglavu, ukupakishwa okupheleleyo kwaye kulula ukuyifaka.
I-Classic kunye neCharming: ukugqitywa kweoyile yokuthambisa ioyile kunye nefom ekrelekrele ikhupha umoya okhangayo oya kukuphindisela kubudala obuzukileyo kwaye uzonwabele ngenkcubeko egqwesileyo yeenqanawa zobhedu zeRetro, abanye baya kuyithanda.
Kulula ukuyisebenzisa: Ukujikeleza kwe-360 degree, uyilo oluphezulu lwe-arc, kunokunyusa indawo yokucoca, kuzise lula ngakumbi kubomi bakho bemihla ngemihla. Isibambo semibhobho emibini yokuhlambela ikuvumela ukuba ulawule ngokulula amaqondo ashushu nabandayo.
Umgangatho ophezulu weXabiso: Umlenze wobhedu kunye nolwakhiwo oluqinisekisa ukuzinza nokuxhomekeka; ICartridge yediski engasebenziyo. Umphunga wombhobho wokuhambisa amanzi owenziwe nge-aerator yeABS unokukunceda ugcine amanzi. (Esi sihambisi-moya singathatyathwa kanye ngezandla sicoceke)
Inkonzo eyenzelwe: Iminyaka emi-5 iwaranti enomda kunye nenkxaso kubathengi inikezelwa. Igqunywe kukubuya kweentsuku ezingama-90. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
SKU: 2321400RB-AMUS iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: I-3 Holes, igumbi lokuhlambela lokuhlambela, isiphatho kabini sombhobho wokuhlambela, Ibronze yeBhotile yeoyile
12.17 x 8.78 x 3.27 intshi
Isitayile kunye nexabiso lemali!
Wow wow! Ngokuqinisekileyo kufanele inkwenkwezi ezintlanu. Kubukeka buhle kakhulu kwigumbi lokuhlambela lam. Ndiyifakile kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo kwaye ibisebenza ngokugqibeleleyo kude kube ngoku. Ndonelisekile yiyo.
Umgangatho walempompo umnandi kakhulu! Umbhobho wokuntywila unokujinga ngapha nangapha onokubakhona. Kwakhona kulula kakhulu ukuyifaka. Ijongeka intle kwaye izisa umsebenzi ngakumbi kwisinki.
Ndiyayithanda le oyile irabhi yobhedu yokuhlambela itepu. Kuza kunye nokucoca kunye nokuhambisa itephu yokuxuba ithumbu. le tephu yamampunge yenye yezona mveliso zanelisayo endakha ndazithenga.
Ukufezekisa ilize lam! Kufanelekile ukuba kucetyiswe !!